ဗီဇာလျှောက်လွှာပါလျှင်, အုပ်ချုပ်ရေး scrivener ကော်ပိုရေးရှင်းတောင်တက်ဖို့ကစွန့်ခွာကျေးဇူးပြုပြီး
ဗီဇာ applications များနှင့်သဘာလျှောက်လွှာ Navi
9: 00 ~ 19: (စနေနေ့, တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များဖယ်ထုတ်ပြီး) 00
E-mail ကိုတိုင်ပင် 365 နေ့စွဲ 24 အချိန်လက်ခံခဲ့သည်
အခမဲ့ E-mail ကိုတိုင်ပင်ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ဒါဟာ re-entry Permit ကိုစဉ်းစား
နေထိုင်ရာကာလ update ကိုခွင့်ပြုချက်လျှောက်လွှာ
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့အစည်းများ? | ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ကိုလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များရဲ့ contents တိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမှမှတ်ပုံတင်ရန် 1 အမှတ်
အစားအစာဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဗီဇာ၏အားသာချက်ကိုယူ - လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များ၏အာရုံကိုအမှတ်ကရှင်းပြသည်နှင့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်စမ်းသပ်
ဗီဇာ applications များနှင့်သဘာလျှောက်လွှာရေတပ်ဆက်သွယ်ရေး
1,000 ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးနှစ်စဉ်လျှောက်လွှာ၏ကြွယ်ဝသောတွင် track record
အဖြစ်အစောပိုင်း 1 နေ့စွဲထဲမှာရှိသကဲ့သို့
Business Administration ဗီဇာ၏လျှောက်လွှာသည်အထိ
အတိုဆုံးအတွက်2အပတ်က
Business Administration ဗီဇာ
ဗီဇာလျှောက်လွှာ အကယ်. အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ scrivener တောင်တက် Takadanobaba ဘူတာကိုချက်ချင်း
ဗီဇာလျှောက်လွှာ Navi တိုကျိုကဇာတ်ရုံ
အရည်အချင်းပြည့်မီ application ကိုအထူးကု၏အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ scrivener ကော်ပိုရေးရှင်းတောင်တက်အဲဒီမှာ
ကုမ္ပဏီ "ဗီဇာ" "သဘာဝ application ကို" ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်စီးပွားရေးစတင်လျက်, ကြီးစွာသောရလဒ်ထွက်ဆက်လက်ကတည်းက။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုနှင့်ဗီဇာကဲ့သို့ client ကိုဂျပန်အတွက် downlink နေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း, ဖြစ်တယ်, ဂျပန်ဖို့အသုံးပြုရရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစသင်လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းစုံလင်စေရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်ပြီ, ထားရန်အရာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့အရေးကြီးသောလျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများဖောက်သည် 1 စာရွက် 1 စာရွက်များ Otsukuri စုံလင်မှကျူးလွန်နေကြသည်။
ဗီဇာနှင့်သဘာ application ကိုရှယ်ယာမှာသောခက်ခဲလျှောက်လွှာဥပဒတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ယုံကြည်ဂျပန်ပညတ်တရား၏နိုင်ငံခြားဖောက်သည်နားလည်မှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, အင်္ဂလိပ် သို့ဖြစ်. အခြားဂျပန်, တရုတ်, ဗီယက်နမ်၏3ဘာသာစကားများမှသက်ဆိုင်ရာကျနော်တို့ဂရုတစိုက်ကြောင်းဖောက်သည်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ခက်ခဲလျှောက်လွှာ contents တွေကိုနှင့်ဥပဒေများကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏စာပေးစာယူများအတွက်ဆောင်ပုဒ်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့သည်န်ထမ်းတစ်ဦးယဉ်ကျေးများနှင့်ရိုးသားသောထောက်ခံမှုအသီးအသီးစီမံကိန်းစမ်းပါ။ အထူးသဖြင့်, နေအိမ်သို့၏ status ကြောင့်ဂျပန်တွင်နေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိတူနေ client များ၏အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ရန်လည်းကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောပြဿနာများကိုဖို့လက်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသည်မပါဘဲတုံ့ပြန်ရန်ယဉ်ကျေးဘယ်တော့မှရှိသည်သောရလဒ်များကိုကျနော်တို့မြင့်မားသောခွင့်ပြုချက်နှုန်းကိုအောင်မြင်ရန်ရှိသည်။ အနာဂတျတှငျကြှနျုပျတို့သညျ "ခွင့်ပြုချက်ရဖို့" နဲ့တူနေ client ဖို့အရေးအပါဆုံးဖြစ်ရည်ရွယ်ပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အဖွင့်ဗီဇာလျှောက်လွှာကတည်းကတဦးတည်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုတီထွင်ခဲ့သည်။ နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသတင်းအချက်အလက်အခြားအုပ်ချုပ်ရေး scrivener အတွက်သိရန်ကိုမပေး, ဘယျအရာဖြစ်ပွားမှုတွေ့ကြုံအမျိုးမျိုးမှရရှိသောကြောင်းအသိပညာစုဆောင်းခဲ့သည်။ ကတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်သင်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော client များ '' အမှုဖို့အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်ကွောငျ့ဆိုစီမံကိန်းတွင်, သငျသညျငွိမျဝပျကစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတရားမျှတမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရို application ကိုကြားခံဝန်ကြီးဌာနကြောင့်ပင်သူတို့အားသင်၏အချိန်ဖြစ်ပါသည်ပါဘူးသူကိုမစိုးရိမ်ကြပါ။
လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးOK ကိုအတွက် Leave !!
သူနိုင်ငံခြားသားများရှုပ်ထွေးသော interaction ကya
ဗီဇာလျှောက်လွှာ4အဆိုပါတောင်တက်ရဲ့ features တွေကိုတဦး
တောင်တက်မှာတော့ပထမဦးဆုံးပထမဆုံးအခမဲ့ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့မျှော်မှန်းရောဂါတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။1,000 ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. တစ်နှစ်တာE-mail ဖြင့်, အလုပ်ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းမှသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုရယူနိုင်ပါသည်ဖြစ်နိုင်ခြေအရာများ၏ဖောက်သည်တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်ရရှိသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အခမဲ့ရှာဖွေရေးကျနော်တို့မည်။
02,သောကြောင့် 1 နေ့စွဲအတွက်အစောပိုင်းအလုပ်အကိုင် လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှု
ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးတာနဲ့သင်ကအတိုဆုံးအချိန်ဇယားထဲမှာအလုပ်ဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်အောင်, အတွေ့အကြုံရှိဗီဇာလျှောက်လွှာနိုင်ပါတယ်အလုပ်လုပ်ဗီဇာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး scrivener"န်ကြီးဌာနတရားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရိုလျှောက်ထားကြားခံ" ကိုတိုက်ရိုက်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။
03,ဂျပန်အပြင် ဘာသာစကားများ3မှသက်ဆိုင်ရာ
ချောချောမွေ့မွေ့တဲ့အလုပ်ဗီဇာလျှောက်ထားဆက်လက်မလုပ်ဆောင်သောအခါ, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရန်စီစဉ်ထားသောနိုင်ငံခြားသားများနှင့်အတူဆကျသှယျဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ အဆိုပါတောင်တက်,အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ scrivener နှင့်ဝန်ထမ်းများကျွမ်းကျင်စွာအထူးပြုဘာသာစကားအခြားအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်, အနက်အထူးကုန်ထမ်းများငါတို့သည်လည်းအားဖြင့်ထောက်ခံမှုထွက်သယ်ဆောင်။
04,ဒါ့အပြင်တောင်းဆိုမှုကိုတစ်ချိန်ကခွင့်မပြုခဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး OK ကို
အဆိုပါတောင်တက်,စက်မှုဝန်ကြီးဌာန-ဦးဆောင်တွင် track record, အတွေ့အကြုံ, Know-ဘယ်လိုတူသောကုမ္ပဏီတွေအတော်များများအနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဗီဇာအဖြစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လျှောက်လွှာချမဟုတ်ပါဘူးမြစ်တားသောအခါနဲ့အတူကျွမ်းကျင်သူများ, byပြန်လည်လျှောက်ထားကျနော်တို့တိုင်ပင်, သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုလက်ခံရရှိ။
KogaA Risa နဲ့တူ
သငျသညျအနီး 20 ~ 30 ပစ္စည်းများငါလငါတို့အားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ရှိပါက။
2019.05.17 ニュースリリース ဒါဟာ "ကမ္ဘာ့ဖလား Daily သတင်းစာ" တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
2019.03.19 ニュースリリース "အလုပ်အကိုင်အနိုင်ငံခြားသားများ" နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ: စားသောက်ဆိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းသာ၏ညှနျကွား
2018.10.19 ニュースリリース အဆိုပါပင်မစာမျက်နှာသက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။
2018.09.01 ニュースリリース ဒါဟာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ရှင်ဂျုကု-ku, ရုံး၏တိုကျို Takadanobaba ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
2018.08.16 ニュースリリース သူမသည်၌ထငျရှားထားပါတယ် "ထိ! တီဗီတွင်" အဓိက MC Katsumata ပြည်နယ်ပေါင်းလဒ်၏။
ကြားရက်များ 9: 00 ~ 19: 00
အကြောင်းကို 1,000 ကိစ္စ၏တစ်နှစ်တာ
အမည်မသိ OK ကို! အခမဲ့တယ်လီဖုန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကိုလည်းလက်ခံခဲ့သည်နေပါသည်
ရက်9အပေါ် hours: 00 ~ 19: 00
အုပ်ချုပ်ရေး scrivener ကော်ပိုရေးရှင်းတောင်တက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်
ဗီဇာ application များနှင့်အသုံးပြုမှု၏သဘာဝ application ကို Navi ~ သတ်မှတ်ချက်များကို -
အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ scrivener ကော်ပိုရေးရှင်းတောင်တက်
စတားပလာဇာ Takadanobaba 8F
© အကယ်. 2019 ဗီဇာလျှောက်လွှာ, တိုကျို, Takadanobaba အတွက်အုပ်ချုပ်ရေး scrivener ကော်ပိုရေးရှင်းတောင်တက်ရန်!